Hay’ada Guriyeynta Degmada – Sida ay u shaqeyso - Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Hay’ada Guriyeynta Degmada – Sida ay u shaqeyso
Meesha Hay'ada Guriyeynta Degmada (Bostadsförmedlingen), waad codsan kartaa kirooyinka dabaqa la heli karo ee aaga Stockholm. Dabaqyada waxaa lagu qoondeeyaa sida ku saleysan waqtiga liiska. Si ay kuugu suurtogasho inaad codsatid dabaqyada, waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangelisid liiska guriyeynta.
Yaa iska diiwaangelin kara liiska guriyeynta?
Qof walba oo ah 18 sano jir ama ka weyn oo leh lambarka shakhsiga ee Sweden ama lambarka iskuxidhka wuu iska diiwaangelin karaa liiska guriyeynta. Dhibaato malahan halka aad ku nooshahay ama haddii aad mar hore leedahay guri falaat ah. Waqtigaaga liiska wuxuu bilaabanayaa durba markii aad is diiwaangaliso. Midaan kadib, waxaad bilaabi kartaa codsashada iyo danaha muujinta ee falaatyada. Waxay goysaa qarashka SEK 200 sannadkiiba si loogu sii jiro liiska guriyeynta.
Noocyada kala duwan ee daganaanshaha
Waxaad ka baari kartaa noocyada kala duwan ee daganaanshaha iyo heshiisyada Hay'ada Guriyeynta ee Stockholm. Haddii aad baraneysid jaamacad, kulliyad ama waxbarasho sare, waad codsan kartaa guriyeynta ardayda. Kuwa idinka mid ah ee u dhaxeeya 18 iyo 25 jir way codsan karaan guriyeynta dhallinyarada. Kuwa idinka mid ahee ah 55 iyo ka weyn, waxaan siinaa deganaansho gaar ah oo ku qaabeysan waayeelnimo. Heshiisyada muddada gaaban waxay bixiyaan fursad aad ku heshid guriyeynta kumeelka gaar ah iyada oo la joogteynayo waqtiga liiska la dhisayo.
Noqo mid dadaal badan
Iqtiyaarkaaga, waxaad codsan kartaa oo aad muujin kartaa danaynta falaatyada bannaan ee la heli karo ee lagu xayeeysiiyay websaydka. Xayeysiinada, waxaad ka heleysaa warbixin sharraxan oo ku saabsan guriyeynta oo ay la jiraan sharuudaha milkiilaha uu ka filanayo kireystayaasha .Markaad gashid, waxaad diiwaangelineysaa danahaaga aad ka leedahay falaatka adoo adeegsanaya xayeesiinta. Niyada ku haay in sida firfircoonida leh ee aad wax u baarto hadba ay ku xiran tahayfursadaada aad ku heleysid falaat.
Intee ayay qaadataa helidda falaat?
Sababtoo ah waxaa ka jiro gabaabsi guriyeyn ee Stockholm, waxaa laga yaabaa inaad sugtid si aad uga heshid dabaqa dhinaceena.
Inta waqti ay kuugu suurtogaleyso inaad ku heshid falaat, waxay ku xirantahay dhowr xaqiiqo, sida halka aad rabtid inaad ku noolaatid, inta dad daneynaya inay halkaas ku noolaadaan, iyo siday u sarreyso kirada aad u diyaar garowday inaad bixisid.
Dadka inta badan hela falaat waxay leeyihiin liiska waqtiga u dhaxeeya 7 iyo 11 sanno, laakin waxay qaadan karaan labadaba waqti gaaban ama dheer. Guud ahaan, waqtiga liiska dheer waxaa looga baahan yahay inuu helo falaatka ah qeybta dhexe ee magaalada ama meel u dhow magaalada, markii la barbardhigo dabqyada bannaanka uga baxsan bartamaha Stockholm.
Wax badan ka aqri
Darqiiqa guri Lagu helo (PDF)
Boggageyga (Mina sidor)